Soomaaliyeey: Kenya Sidaan Kuuma Gasheen ‘Hadii Aad Dowlad Midaysan Lahaan Lahayd’ | http://kismaayodaily.com
Waxaan inta qarniga ka dhiman aan marna Soomaali oo dhan hilmaami doonin sida sharci darida ah oo ay askarta sida gaarka ah loo tababaray ee loo yaqaan GSUda ula dhaqmeen qaxootiga Soomaaliyeed ee deganaa magaalada Nairobi iyo agagaarkeeda. GSUda oo ficilada noocaas oo kale ah waligood ula dhaqmi jiray ruuxi ay u gartaan in uu Soomaali yahay, ayaga oo aan u aabe yeelin in Somaligu yahay Soomaalida degan Waqooyi Bari Kenya iyo in Soomaaligu yahay mid Soomaaliya ka yimid.
Waxaase jirta in Dowlada hada jirta iyo kuwii la dhisey dagaalkii sokeeye ka dib aysan wax aqoon ah u lahayn dowlada Kenya iyo sida ay ugu takri fasho guud ahaan dadwaynaha Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa degan xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya agagaarkooda.
Arintaan waxaa aad uug war qaba ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsan jirtey Bar-xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya sida Libio-Dhobley iyo Buulo Xaawo.
Sababta aan u irina waxay tahay, Aabahay ayaa waxaa uu ka gatey dhul magaalada bar-xuduuda Libio- Soomaaliya, oo ah bar-xuduuda labaad ee ku xigta Buulo-Xaawo. Waxaa uu halkaa Aabahay iyo Hooyadey ka fureen magaaladaas Farmashiyii ugu horeeyey ee magaaladaas laga furo. Sidoo kalena, waxaan ahayn ganacsatadii ugu horeeysey ee magaaladaas ku gado SODHA QABOW “Soda” Iyo JALAATO. Intii aysan ganacsigaan bilaabin, waxaa Sodhada “Soda” qabow loo doonan jirey dhinaca Kenya.
Waxaan waqtigaas ahaay arday dhigta Dugsiga sare ee Ganaane, Kismaayo, ee gobolka Jubbada Hoose. Markii iskuulka la xiro ayaan waxaan u safri jirey Libio-Soomaaliya si aan u caawiyo Aabahay iyo Hooyadey. Waxaan ku hadli jirey waxoogaa Afka ENGRIISIGA ah iyo waxoogaa afka SWAHILIGA ah oo aan ka bartey Aabahay oo ku hadli jirey (AUN) Afka BAAJUUNIGA oo isna ka mida SWAHILIGA. Reerkeena waxaa wax ka gadan jirey Soomalida Kenya degan, dadka Kenyatiga ah iyo Askarta GSUda. Waxaan halkaa isku baranay nin la yiraado Roy, oo ka tirsanaa GSUda Kenya ee sida gaarka loo tababaro. Waxuu ahaa nin aad u da’a yar oo markuu dugsiga sare ka qalin jabiyey, ku biirey ciidankaas.
Waxan waydiiyey waxaa uu uga duwan yahay Askarta kale. Waxuu igu yiri “waxay dhamaan ka yimaadeen TUULOOYIN, meesha aan anigu degenaana waa magaaloo wayn” Ma xasuusto magaaladii uu yiri waan ka imi, laakiin qabiilka uu ii sheegtey ayaa waxay yihiin dadka dega agagaarka magaalda Kisumu. Waxuu intaa ku darey “askarta kale waxaa weli maskaxdooda ka guuxaysa quraafaadkii loo aqriyey oo ah in Soomaalidu tahay SHIFTA”. Hadalkiisii asiga oo sii wata. ayuu intaa raaciyey “anigu adoo kale ayaan ahay, waxaan mar dhow ahaa ardey – markii aan dugsiga sare ka qalin jabiyeyna, waxaan ku biirey ciidanka, marna ma aaminsani in Soomaalida oo dhan tahay SHIFTA, laakiin askarta kale ee asiga ka wayn, ay weli ka dhaadhacsan tahay in Soomaali oo dhani SHIFTA yihiin”.
Runtii xaqiiqda arintaan inkasta oo aan hubin, laakiin waxaa cad in GSUda ay yihiin ciidan loo diyaariyey tacadiga Soomaali meelkasta ha ku dhashaane. Roy iyo hadaldiisana aan idinla qaybsadeyna, waxay markhaati u yihiin in GSUda maankooda la geliyo in Soomaalidu tahay cadowga kali ah oo ay Kenya leedahay. Marka dowlada Kenya si ay u bedesho siyaasadeeda ku aadan ilaalinta xuquuqda Soomaaliyeed waa in aan leenahay dowlada baaris ku samaysa wadamada sida Kenya oo kale ah oo dadwaynaha Soomaaliyeed sida bareerka ah loogu sameeyo tacadi iyo takoor ayaga keli ah lala beegsado sida South African oo kale.
Waxaa soo aruuriyey: Mohamed Barre – Junlay “Buluf” oo wax ka qora arimaha Soomaalida, degana magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota – junlay99@aol.com
Kismaayodaily On April - 28 - 2014